किमको हत्या कसले गर्‍यो? दोषी खोज्दै मलेसियाली सुरक्षाअधिरकारी | Nagarik News - Nepal Republic Media
किमको हत्या कसले गर्‍यो? दोषी खोज्दै मलेसियाली सुरक्षाअधिरकारी
४ फाल्गुन २०७३ ६ मिनेट पाठ
मलेसिया—मलेसियाली प्रहरीले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनका दाजु किम जोङ नामको हत्यामा संलग्नको खोजी तीब्र पारेको छ। हत्याको वास्तविक रहस्य सार्वजनिक नभएको र विश्वभरिबाट चासोका साथ हेरिएको घटनालाई सुरक्षा अधिकारीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
विमानस्थलमा विष खुवाएर नामको हत्या गरेको अभियोगमा मलेसिया प्रहरीले एक महिला पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पक्राउ महिलासँग भियतनामको यात्रा कागजात भेटिएको छ।
हत्याका लागि किम जोङ उनको हात रहेको छ। उनले नै हत्याका लागि निर्देशन दिएको हुनुपर्छ। यसअघि पनि नामलाई मार्ने प्रयास गरिएको थियो', एक जना दक्षिण कोरियाली सांसदले भने।
नामको हत्यामा उत्तर कोरियाली सरकारै संलग्न हुनसक्ने अनुमान अमेरिका तथा दक्षिण कोरियाले गरेका छन्। नामको ४५ वर्षको उमेरमा सोमबार मलेसियामा हत्या भएको थियो। उनी कोरियाका पूर्व शासक कोम जोङ इलका साउतेनी आमापट्टिका जेठा छोरा हुन्।
उत्तर कोरियामा किम जोङ उन सर्वोच्च नेता बन्नु अघि उनलाई शासनको उत्तराधिकारीको रुपमा पनि हेरिएको थियो। सन् २००१ मा उनी नक्कली राहदानीमा जापान प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए। पक्राउ परेपछि उनले जापानी अधिकारीहरुलाई आफू टोकियोको डिज्नेल्यान्ड घुम्न जान लागेको बताएका थिए।
चीनको संरक्षमा थिए नाम
सोमबार मकाउ जानका लागि नाम मलेसियाको बजेट ट्रनिमलमा विमान पर्खिरहेका थिए। त्यही बेला एक जनाले पछाडिपट्टिबाट समाते। त्यस लगत्तै उनी बेहोस भएर लडेका थिए। विमानस्थल ट्रान्जिटमा मान्छे ढलेको देखेपछि अन्य यात्रुले प्रहरी डेस्कमा खबर गरेका थिए। नाम बेइजिङको संरक्षमा रहेको दक्षिण कोरियाको विश्वास छ। उनकी श्रीमती समेत चीन नियन्त्रित मकाउकै हुन्। नामका छोरा बेइजिङ बस्दै आएका छन्।
हत्या अनुसन्धान कसरी हुँदैछ?
मलेसियाली प्रहरीले विमानस्थलको सिसिटिभी फुटेज हेरेर महिला पक्राउ गरेको हो। मलेसियाली मिडियाले सार्वजनिक गरेकी महिलाले अगाडिपट्टि 'लोल' प्रिन्ट भएको सेतो टिसर्ट लगाएकी छिन्। प्रहरीले उनीसँग भियतनामी यात्रा कागजात फेला पारेको छ। प्रहरीका अनुसार सन् १९९८ मे महिना जन्ममिति रहेकी ती महिलाको वास्तविक नाम डोन थाइ ह्युङ भएको बताइएको छ। उनी भियतनामी नागरिक हुन्। प्रहरीले सिसिटिभी फुटेज जम्मा पारी सबै विदेशी नागरिकबारे छानविन गरिरहेको जनाएको छ।
नामको हत्या पछाडि उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको भूमिका रहेको दक्षिण कोरिया बताउँदै आएको छ। 'यो हत्याका लागि किम जोङ उनको हात रहेको छ। उनले नै हत्याका लागि निर्देशन दिएको हुनुपर्छ। यसअघि पनि नामलाई मार्ने प्रयास गरिएको थियो', एक जना दक्षिण कोरियाली सांसदले भने।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ १७:४९ बुधबार
किमको हत्या कसले गर्‍यो दोषी खोज्दै मलेसियाली सुरक्षाअधिरकारी